“गुरुयोजना नै बनाएर काम गर्दै छौं” « News of Nepal
नगर प्रमुख, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, काठमाडौं
निर्वाचित भए लगत्तै बनाउनु पर्ने गुरु योजन बनाउन ढिला भएन र ?
–गुरु योजना निर्माण गर्नको लागि तथ्याङ र आधार चाहिन्छ । अहिले ०६८ सालको तथ्याङक मात्र पाइन्छ । पुरानो तथ्ङकलाई आधार बनाएर त भएन । यस अवधिमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका तीब्र गतिमा शहरीकरणमा गएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकासँग पनि जोडिएको नगरपालिका हो ।
-सडक लथालिङ हुँँदा पनि टुलुटुलु हेरेर बस्नु परेको छ
-चक्रपथ बाहिरको सडक पिच नभएसम्म काठमाडौं सफा हुँदैन
-गुरु योजना बनाएपछि विकास निर्माणको काम गर्न सहज हुन्छ
पुरानो तथ्याङकले अहिलेको अवस्थामा काम नगर्ने भएपछि नयाँ वेशमा जाऔ भन्ने हाम्रो नीति हो । हामीले योजना नै नबनाएको पनि होइन । गौरवको योजना बनाएर अगाडि बढाएका छौं । गुरु योजनाभित्र, सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य शिक्षा लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माण कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने विषयको टुंगो लगाएर काम गछौं । गुरु योजनाले दिर्घकालिन योजना र नीति निर्माण गर्छ ।
नगरपालिकाभित्र हुने विकासको कामलाई एकीकृत ढंगले अगाडि बढाउने केही नीति बनाएको छ कि ?
– अहिले ढल निर्माण नगरिकन नगरपालिकाले सडक निर्माण गर्न दिएको छैन् । ढल हालेपछि त्यही बर्ष कालोपत्रे गर्न नहुने समस्या आएको छ । सडक विस्तारको काम निकै जटिल छ । बिजुलीको पोल, टेलिकमको पोल सार्न त्यतिकै कठिनाइ छ । ढल निर्माण, खानेपानीको पाइप हाल्नु पर्ने अवस्था छ ।
खानीपानीको समस्या समाधानको लागि के गरिरनुभएको छ ?
मेलम्चीको खानेपानीमा पनि हामी हाम्रो नगरपालिका दोस्रो चरणमा परेको छ । याङग्री र लार्के आएपछि मात्र हाम्रो नगरपालिकाले पानी पाउनेछ । मेलम्चीको पानी आउन अझै समय लाग्छ । हामीले तत्काल नगरवासीलाई खानेपानी व्यवस्था गर्न काडाँघारी खानेपानी आयोजना अगाडि बढाएको छौं । ३२ करोडको आयोजनामा केन्द्र सरकारले पचास लाख बजेट दिएको छ । यसरी त कहिले सम्पन्न होला ? अहिले सडक निर्माण गर्दा सडक पेटी निर्माण गर्न छोडेका छौं । सडकपेटीबाट पाइपलाइन लैजाने नीति छ । डाँछी भद्रवासमा पचास÷पचास लाखको खानीपानी ट्याङकी निर्माण गरिसकेको छौं । खानेपानीको केही स्रोत पनि छ । खानेपानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं ।
घरबहाल कर तिर्नेको संख्या कस्तो छ ?
–२०७१ सालमा हाम्रो नगरपालिका बन्यो । अहिले भर्खर भर्खर घर कर तिर्न थालेका छन् । जति घर बनेका छन् ती डिजिटल प्रविधिमा राखेका छौं । गत बर्ष सात हजार घर आएका थिए ।
नगरपालिकालाई सुरक्षित बनाउने अभियानमा के योजना अगाडि सार्नुभएको छ ?
–हामीले नगरपालिकाभित्र सिसी क्यामेरा राख्नको लागि सर्भेको काम गरिरहेका छौं नगरपालिकालाई हामीले तीन वटा जोनमा विभाजित गरेका छौं । वडा नम्बर १,२,३ वडा नम्बर ४,५, ६ र वडा नम्बर ७,८ र ९ जोनमा विभाजि गरेर काम अगाडि बढाएका छौं । काँडाघारी प्रभाव र गागलमा सिसी क्यामेरा जडान गरेर प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरेका छौं ।
हामीले करिब ७ सडक बत्ती जडान गरेका छौं । सेन्सबाट सञ्चालन हुने बिजुली वत्ती नै प्रयोग गरेका छौं । सिसी क्यामेरा जडान भएपछि राम्रो भएको छ । समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छ । हामीले पनि प्रहरीलाई सक्दो सहयोग गरिरहेका छौ. । अहिलेको सर्वे अनुसार २ करोड लाग्ने देखिएको छ । नौ वटा वडा कार्यालयमा जडान हुने सिसी क्यामेरा नगरपालिकाले अनुगमन गर्छ ।
त्यसैगरी सबै वडाको मुख्यमुख्य चोकमाा सिसी क्यामेरा जडान गरेर प्रहरीलाई हस्तान्तरण गछौं । सुरक्षित नगरपालिका बनाउन हामी प्रहरीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढेका छौं । बौद्ध र कोटेश्वर दुवै प्रहरी वृत्तले हेर्दा केही समस्या छ ।
नगरवासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
–हामीले काम गर्ने हो । विकास निर्माणको मुल्याङकन गर्ने काम नगरवासीको हो । नगरपालिकाभित्र विकास निर्माणको काम तीब्र गतिमा नै अगाडि बढेको छ ।सबै काम नगरपालिकाबाट मात्र सम्भव हुँदैन । हाम्रो नगरपालिका हामी आफैले बनाउनु पर्छ भन्ने नगरपालिकाको आग्रह छ । हामी नगरवासीको सक्रियता देखेर खुसी छौं । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नगरवासी मिलेर मात्र नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।